Indlela yokujonga i-Disc kunye neDrum Brakes
idilesi hfa 230 21
Kuya kufuneka ujonge iziqhoboshi zediski kunye nediski yokuqhekeza idiski rhoqo emva kweemayile ezingama-10,000- rhoqo ukuba iziqhoboshi zakho ngequbuliso ziqala ukukhala okanye tsala kwelinye icala, okanye xa ibhreyikhi yakho yokuqhekeza ibhabha xa uyinyathela. Musa ukudibanisa ukubetha kwamaphepha ngokutshiza okuqhelekileyo kweziqhoboshi ze-ABS xa zifakwa kwindawo yokumisa likaxakeka.
Namhlanje, uninzi lwezithuthi zineebhureki zeediski ezinamavili amane. Abanye baneziqhoboshi zeediski kumavili angaphambili kunye neziqhoboshi zegubu kumavili angasemva.
Xa ujonga iziqhoboshi zakho zediski, linganisa ubungakanani belinings kwiipads ukuze uxele ukuba ii-linings ezikwiibreyikhi zakho zonakele kakhulu. Ukuba ulwelwesi luye ezantsi kubukhulu bepleyiti exhasa isinyithi, iipads kufuneka zitshintshwe.
Ukujonga iziqhoboshi zeediski, landela la manyathelo:
Qhobosha imoto yakho kwaye ususe ivili langaphambili.
Sebenzisa iibhloko zamavili ukhuseleko.
Jonga kwi-brake disc (ekwabizwa ngokuba yi-rotor), kodwa ungazami ukuyisusa kwisithuthi.
Jonga iibhuleki zakho zeediski.
I-briper caliper kufuneka isuswe ngaphambi kokuba ususe i-disc brake, kwaye iindaba ezimnandi zezokuba akukho mfuneko yokwenza njalo. Ukuba usebenza wedwa, jonga nje indawo ebonakalayo yediski ukuba irusi enzima, ukufaka amanqaku, kunye nokunxiba okungalinganiyo. Umhlwa ngokubanzi awunabungozi ngaphandle kokuba isithuthi besime ixesha elide kwaye umhlwa wona wakhekile.
Ukuba idiski yakho inamanqaku angalunganga okanye inxitywe ngokungalinganiyo, yiba nochwephesha anqume ukuba ingaphinda ibuye okanye ifuna ukutshintshwa.
Hlola i-briper caliper yakho (icandelo elithintela ukujonga kwakho kuyo yonke i-disc).
Lumnka. Ukuba isithuthi siqhutywa kutshanje, i-caliper iya kushushu. Ukuba kupholile ukubamba, yibambe kwaye uyihlukuhle ngobunono ukuze uqiniseke ukuba ayinyuswanga ngokukhululekileyo kwaye nezixhobo zayo azinxitywanga.
Jonga emngxunyeni wokuhlola kukhuselo lothuli kwi-caliper kwaye ujonge iipads zokuqhekeza ngaphakathi.
Ukuba i-linings kwi-brake pads ijongeka icekeceke kakhulu kunezintsha ozibonileyo kwivenkile yokubonelela okanye kwisebe lezinto ezithengisayo, kuya kufuneka zitshintshwe. Ukuba i-linings inxibile kwiipads zentsimbi, i-disc mhlawumbi kufuneka iphindwe kwakhona okanye ithathe indawo kwakhona.
Guqula ivili lakho, amantongomane e-lug, kunye ne-hubcap, kwaye wehlise isithuthi emhlabeni.
Ukuba idiski kunye neepads kubonakala ngathi zikwimeko entle kwaye inyathelo lakho lokuqhekeza alihambi xa unyathela, akukho mfuneko yakwenza enye into.
Ukudibanisa, ukugcinwa kwe-caliper, kunye nokuguba idiski kufuneka kushiyeke kubuchwephesha ngaphandle kokuba wenze umsebenzi phantsi kweliso kwiklasi yemoto.
Ukujonga njani iziqhoboshi zeDrum
Kuya kufuneka ususe iqela lamalungu ukuze ufike kwibreyiki yegubu. Amanyathelo apha achaza indlela yokujonga iibhuleki zegubu kunye nokuba ujonge ntoni xa ekugqibeleni ufika kubo. Landela la manyathelo ukujonga iziqhoboshi zegubu:
Lungiselela ukwenza lo msebenzi kwindawo enomoya kakuhle, nxiba imaski yamaphepha engabizi mali ininzi kodwa ekhuselayo, kwaye ulumke kakhulu ungaphefumli uthuli kwigubu le brake.
Qhobosha imoto yakho kwaye ususe ivili.
inkampu phantsi kweembambo zasekunene
Imigqomo ye-brake ihlelwa njenge hubbed okanye floating (hubless). Iigubu ezifakiweyo zineebheringi ezinamavili ngaphakathi kwazo; Igubu elidadayo limele ukutyibilika ngaphaya kweengxowa zeengqayi ezigcina amavili kwisithuthi.
Ukusebenza kwangaphandle kwebhuleki yegubu.
Ukuba unesigubhu esine-hubbed, caphula igrisi yokuphelisa isiphelo sehabhu usebenzisa iperi yokudibanisa isilungelelanisi esidityanisiweyo.
Ukuba unesigubhu esidadayo, tsiba inyathelo lesi-3 ukuya kwelesi-7 kwaye usilayide nje igubu kwibala.
Ngamanye amaxesha kufuneka ubethe imigqomo edadayo ngesando ukuze uyophule ngaphandle kwehabhu.
Iphini yecotter incamathela ecaleni kwenutellated cast okanye i-nut-lock-and-nut combination.
imifanekiso ye-1mg xanax
Qaphela ukuba ujonge kweliphi icala, imilenze ijijekile, ingena njani kumantongomane, kwaye ixinene kangakanani. Ukuba kukho imfuneko, yenza isiketshi.
Yolula isikhonkwane sombhobho kwaye uyikhuphe.
Sebenzisa iipleyiti zempumlo yenaliti. Yibeke phantsi kumdaka ococekileyo, ukhombe kwicala elinye nanjengoko wawusendaweni.
Isilayidi se-castellated nut okanye i-nut-lock-and-nut indibaniselwano.
Ukuba igrisi, yisule nge-rag engenantambo kwaye uyibeke kwi-rag ecaleni kwephini yecotter.
Bamba isigubhu se-brake kwaye usitsalele kuwe, kodwa musa ukusilayida isigubhu kwintonga yokuluka okwangoku; tyhala nje igubu libuyele endaweni yalo.
Izinto ezishiyekileyo kwintonga yokuluka ziibhere zangaphandle zevili kunye newasha.
Slayida ngononophelo ubambo lwangaphandle, kunye ne-washer ephambi kwayo, ngaphandle kwentonga yokuluka.
Logama nje ususa iibheringi zakho, kuya kufuneka uzitshekishe ukuba azinxitywanga na.
Slayida ngononophelo igubu kwindawo yokuluka, kunye neebheringi zangaphakathi ngaphakathi kuyo.
Ukusezela uthuli lwebrake kunokukugulisa kakhulu. Ungaze uvuthele uthuli ngomoya oxineneyo. Endaweni yoko beka imaski yakho kwaye ugcwalise uthuli ngokupheleleyo ngokutshiza igubu ngeziqhoboshi zecandelo lokucoca ngokwemiyalelo yetoti. Sula igubu licocekile ngelagi; emva koko beka amadlavu eplastikini uze uwulahle ngoko nangoko.
Jonga ngaphakathi kwigubu.
Unokubona iigrooves kwiindonga zangaphakathi ukusuka ekunxibeni. Ukuba ezi mijelo zikhangeleka zinzulu ngokungaqhelekanga, okanye ukuba ubona iindawo ezinzima okanye indawo ezitshisiweyo, cela indawo yakho yokunikezela ngenkonzo ukuba ikuvumele ubukele ngelixa bejonga amagubu nge-micrometer.
Ukujonga ukunxiba igubu nge-micrometer
Ukuba imigqomo ayinxitywanga ngokudlulileyo kwezomthetho (i-0.060 ye-intshi), inokuphinda ibuye (okanye ijikwe) endaweni yokutshintsha.
Ukuba ufuna amagubu amatsha, yiba nochwephesha akufakele wona ngenxa yokuba izihlangu ezi brake kufuneka zilungiswe ukuze zilingane.
Jonga ezinye iziqhoboshi zakho, ezisaqhotyoshelwe kwipleyiti exhasayo.
Nazi iinxalenye ekufuneka ujonge kuzo:
ukusela ngelixa ukwi-naltrexone
Ukusebenza ngaphakathi kwebhuleki yegubu
Iisilinda zevili: Oku akufuneki kubonise zimpawu zokuvuza kwamanzi.
Izihlangu waziqhekeza kunye linings: Ezi kufuneka zinxitywe ngokulinganayo, kungabikho mabala anebala okanye indawo ezincinci. Ukufakwa kwebhuleki kufuneka kube ubuncinci kwishumi elinesithandathu leesentimitha ukusuka kwinxalenye yentsimbi yesihlangu esiqhekeziweyo okanye i-intshi ye-1/16-intshi kuyo nayiphi na iirivet kwizihlangu zebreyiki ezinee rivets, ngakumbi ngaphezulu. I-linings kufuneka ibotshelelwe ngokuqinileyo okanye i-riveted kwizihlangu ze-brake. Uninzi lwezihlangu eziqhekeziweyo kunye ne-linings zakhelwe ukuhlala i-20,000 ukuya kwi-40,000 yeekhilomitha; ezinye zihlala ixesha elide. Ukuba okwakho ubukwinqwelo-mafutha yakho kangangexesha elithile, baya kuba nemijelo kuzo kwaye banokuqaqamba ngandlela ithile.
Vavanya izixhobo zokuzihlengahlengisa kwiibhuleki zakho.
Landa intambo ukusuka kwipini ye-anchor ngaphezulu kwesilinda yevili, macala onke epleyiti exhasayo, ukuya kwisilungisi emazantsi epleyiti.
Ukuba i-pedal pedal yakho ivula iibhuleki zakho ngaphambi kokuba iye ezantsi emgangathweni, uhlengahlengiso mhlawumbi lulungile. Ukuba akunjalo, kwaye ukuba iisilinda, i-linings, izihlangu, njalo njalo zilungile, izixhobo zokulungisa zinokuphuma. Ukwenza isibini sokuya phambili kunye nokubuyela umva kufuneka sikulungise.
I-zoloft yinto elawulwayo
Isebenza njani ibhola yomnyazi
iziphumo ebezingalindelekanga kubantu abadala
uvavanyo lokukhulelwa olungalunganga
yenza ntoni igesi yentsholongwane
Umatshini wokuguqula umda ngokulandelelana ti 84